Miady Mafy Ety Anaty Serasera Ilay Kandidà Hirotsaka Ho Mpitantana ny Fikambanana Iraisampirenena Misahana ny Fahasalamana, Nefa Mandà Ny Fisian’ny Kolerà Ao Etiopia · Global Voices teny Malagasy
Miady Mafy Ety Anaty Serasera Ilay Kandidà Hirotsaka Ho Mpitantana ny Fikambanana Iraisampirenena Misahana ny Fahasalamana, Nefa Mandà Ny Fisian'ny Kolerà Ao Etiopia
Voadika ny 22 Mey 2017 5:05 GMT
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Minisitry ny Raharaha Ivelany, Etiopia, miteny ao amin'ny Chatham House. Sary Wikipedia.
An'arivony maro ireo bitsika, marobe ireo taratasy misokatra ary fanentanana iray tsy an-kiato ety anaty aterineto no mampijaly saina aman'eritreritra an'i Tedros Adahanom, ilay kandidà avy ao Etiopia ho Tale Jeneralin'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamana (OMS), satria amin'ny 23 May 2017 ho avy io no miomana ny hifidy ireo firenena mpikambana ao. Saingy moa ve dia tena tsy tia mainty azy tokoa ry zareo Etiopiana?
Miaraka amin'ny fanohanana avy amin'ny governemanta Etiopiana, nanomboka fampielezankevitra izay matanjaka sy tsara voatra Ing. Adahanom, tamin'ny fanaovana izany ho amin'ny fihodinana faran'ireo mpirotsaka; na dia mbola mijanona ho tsiambaratelo aza ny niavian'ireo vola namatsiany ny fampielezankeviny.
Raha toa ny fifidianana izay ho tale jeneralin'ny OMS amin'ny ampahany betsaka ka raharaha tsy dia mampilendalenda sy raharahan'andrimpanjakana, ireo Etiopiana manao fanoherana mafy ety anaty aterineto kosa nanampy rantsan-tetikady mahaliana tahaka ny asehon'ireo fifanoherankevitra sasany avy amin'i Adahanom.
@WHO #NoTedros4WHO #WHODG @BBCBreaking Tsy afaka ny ho tale jeneralin'ny OMS i Tedros izay nandà ny fisian'ny valanaretina kolerà ao Etiopia
Mety nahatonga ireo haino aman-jery hitondra fanazavàna misimisy kokoa momba ireo fifanoherankevitr'i Adahanom ihany koa ny fampielezankevitra tsy an-kiaton-dry zareo.
Ny “New York Times”, ohatra, dia namboraka fa nosarontsaronan'i Adahanom ny fiparitahan'ny valanaretina kolerà nandritra ny naha-minisitry ny fahasalamana azy tao Etiopia.
Andro vitsy taty aoriana, nitatitra ny “Washington Post” fa “tsy tian'i Adahanom ny mitanisa karazan'aretina sasantsasany“.
Ny Lancet, gazety Britanika manana ny hajany, miresaka momba ny fahasalamana, dia namoaka taratasy fohy, manindrona, milaza ny tsy firaharahian'i Adahanom ireo fifanarahana nifanaovanireo manampahefana Etiopiana tamin'ireo orinasa mpanao sigara Japoney sy Britanika. Ao anatin'ilay taratasy, nilaza i Frank Ashall avy amin'ny Africa Tobacco-Free Initiative hoe :
Raha raisina iretsy olana voatanisa ery aloha, mino aho fa tsy i Tedros no ilay kandidà ilain'ny OMS hitondra azy handroso.
Nampangain'i Adahanom ilay mpifaninana aminy, Dr. David Nabarro, ho manana toetsaina imperialista saingy tsy nisy nolaviny na iray aza ireo fiampangàna mahatonga ny firotsahany hiteraka resabe.
Nandritra izany fotoana izany, tao anatin'ireo andro farany amin'ny fampielezankevitra, niha-nahery ireo mpifanandrina amin'i Adahanom.
Olona iray nahazo medaly olaimpika, Feyisa Lelisa, izay nanao sesitany ny tenany taorian'ny nanaovany hetsika nanoherana ny governemanta Etiopiana nandritry ny Lalao Olaimpika tao Rio no nangataka an'i Adahanom hihataka amin'ilay hazakazaka no sady hiala tsiny amin'ny vahoakan'i Etiopia noho ny anjara andraikiny tamin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy nanarontsaronany ny fiparitahan'ny valanaretina kolerà tamin'ny naha-minisitry ny fahasalamana azy. Taratasy misokatra nalefany ho an'ny Al-Jazeera no nanaovan'i Lelisa ilay fangatahana.
Reeyot Alemu, mpanao gazety efa nahazo loka, dia nanoratra taratasy misokatra nanoherany ny firotsahan'i Adahanom, nalefany ho an'ny Fivoriamben'ny OMS izay voalahatra hatao ny 22 May ao Zeneva, Soisa.
Ny antony anoratako ho anareo androany dia ny tsy hanehoana fitserana. Satria aho mino mafy fa ny OMS, fikambanana iray manerantany manana ny lanjany, dia eo an-dàlana ny hilatsaka anaty hantsan'ny tantara ratsy. Atahorako ny lazan'ny OMS ho voapentina ary ny fitokisana azy hanjary hametrahana fanontaniana raha toa ka i Dr Tedros Adhanom no fidiany. Ny zavamisy hoe i Dr. Adhanom, iray amin'ireo sangany tamin'ny fanitsakitsahana zon'olombelona nahatonga ny fiainana anaty fahantran'ny vahoaka Etiopiana, no nahavita tonga ho isan'ireo telo farany hofidiana, miezaka ny haka ny toerana tale jeneraly, dia tena mampahatahotra sy manaitra.
Politisiana iray malaza koa anefa, Habtamu Ayalew, izay voarara tsy hiala ao Etiopia noho ny antony ara-pahasalamana, no nilaza:
Tsy azoko eritreretina mihitsy ny hoe olona iray nandà tsy hanome fikarakarana ho an'olona iray niharan'ny fampijaliana no mikasa hihazakazaka ho tale jeneralin'ny fikambanana manerantany misahana fahasalamana
Kanefa, namaly bontana ny tarik'i Adahanom,tamin'ny fanamafisana fa anjaran'i Afrika izao no mitantana ny OMS:
3 andro sisa!!! “Fotoana izao ho an'i #Afrika ” satria izy no manana ny kandidà mendrika indrindra ho tale jeneraly manaraka ao amin'ny #OMS, @DrTedros #Ethiopia